असार साउनमा कोरोना भयावह बन्ने ! सङ्क्रमित संख्या कति हुन सक्ला ? हजारौं जनालाई संक्रमण हुनेछ । ती मध्ये ८५ % लाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुनेछ । बाँकी १५ % मध्ये आधालाई अस्पतालको सामान्य उपचारले निको हुनेछ । बांखी ७-८ % लाई आइसीयु, भेन्टिलेटर आबश्यक पर्नेछ । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात ३ % को मृत्यु हुनसक्छ । . शनिबार, जेठ ३, २०७७
सङ्क्रमण बढे पनि आशाका किरण देखिँदै बुधबार, वैशाख ३१, २०७७ नेपालमा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्म २१९ जनामा देखिएको छ । नेपालसंगै कोरोना संक्रमण देखिएको बंगलादेशमा हालसम्म १६,६००, अफगानिस्तानमा ४९६३, माल्दिभ्समा ९०४, श्रीलंकामा ८८९ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
लकडाउन अझै नलम्बियोस्, दिन कसरी बिताउनु ! शनिबार, वैशाख २७, २०७७ यसो सोचेँ कस्तो समय नै उल्टो पो चलेछ क्यार ! ती सम्पूर्ण गतिविधि त कल्पना जस्तो पो लाग्न थाल्यो । सधैँ हतार हुने मलाई अहिले कुनै हतारो छैन । यतिबेला कुन समयमा के गर्ने, मेरो कुनै योजना नै छैन ।
कोरोना संक्रमण पुन : पोजिटिभ देखिएको बारे बुधबार, वैशाख २४, २०७७ सनसिटी अपार्टमेन्टका ५८ बर्षीय पुरुष र नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका २ पुरुषमा फलो अप जाँचको क्रममा कोरोना संक्रमण पुन : पोजिटिभ देखिएको छ ।
यदि 'लकडाउन' खुल्यो भने नागरिकले के गर्ने, के नगर्ने ? सोमबार, वैशाख २२, २०७७ सरकारले २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । हरयो, पहलेरो, रातो सूची बनाएरठाउँ अनुसार लकडाउन कडा बनाउने तयारी गरेको छ । लगडाउन खुलेपछि नागरिकले के गर्ने ?
बन्दाबन्दीका 'मुस्कान'हरू शनिबार, वैशाख २०, २०७७ भन्नुपर्ने अझै सकिएको थिएन, ‘मसँगै एक जना अर्को साथी पनि कोठा लिएर बसेका छौँ । यसअघि एक पटक वडाले पाँच किलो चालम दिएको थियो, त्यो पनि सकियो । के गर्ने होला ? केही पहल गरेर मलाई सहयोग गरिदिनुस् न है । मैले हिजो साँझदेखि केही पनि खान पाएको छैन ।’
'बन्दाबन्दी' हाम्रै लागि तर अटेरी किन नि ! बिहिबार, वैशाख १८, २०७७ त्यसपछि महिला आफ्नो बाटो लागिन् र प्रहरी पनि आफ्नो बाटो लाग्यो । त्यसको केही बेरपछि उदिनढुङ्गा जीपपार्कबाट केही सशस्त्र प्रहरी मुख्य सडकतिर निस्किए । त्यत्ति नै बेला एकजना होटलका साहू घरबाहिर निस्किए ।
कोरोना कहरः सरकार छ पनि, छैन पनि बुधबार, वैशाख १७, २०७७ सरकारहरूले के गर्लान् ? तिनीहरुसँग कुनै योजना होला ? तिनीहरूसँग कुनै तयारी होला ? कि फु–मन्तर गरेर कोरोना चट पार्लान् ? त्यही भएर, बन्दाबन्दीलाई पूर्ण पालन गरौँ । आफैं जिम्मेवार बनौँ । यहाँ यस्तै छ, भुँई मान्छेका लागि सरकार छ पनि छैन पनि ।
कोरोना सङ्क्रमणले रुप फेर्दै, नेपालमा झन् कम्जोर आईतबार, वैशाख १४, २०७७ उच्च आत्मबलले यो रोगलाई सजिलोसँग जितेको अनुभव सङ्क्रमितहरुले बताइरहेका छन् । सङ्क्रमणको २ महिनासम्म सङ्क्रमितमध्ये करिब २० % सङ्क्रमित गम्भीर अवस्थामा पुगेका थिए भने अहिले रोकथामका उपाय र उपचारको कारण ३ % मात्र गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।
धनीलाई रोगको,गरिबलाई भोकको चिन्ता शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ सुन्दा आकर्षक लाग्ने सरकारको एउटा नारा छ । ‘कोही भोकै नपरोस्, भोकले कोही नमरोस् ।’ तर जबजब नागरिकका भोकको पीडा मिश्रित आक्रोस् सुनिन्छ, यो नाराले झस्काउँछ । सरकारले कोही भोकले भौँतारिनु पर्दैन् त भनेको छ तर मान्छेहरू भोको पेट लिएर राजमार्गको लामो यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
सन्तानको 'खुसी' देख्ने आमाका सपनाहरू बिहिबार, वैशाख ११, २०७७ एउटा सन्तानलाई पीडा हुँदा सबैभन्दा पहिले आँसु झार्ने आमा नै हुन् भने सन्तानको सफलतामा खुसीको आँसु झार्ने पनि आमा नै । भनिन्छ ‘एउटा सुन्दर र सफल घर हुनका लागि आमा असल हुनुपर्छ ।’
बन्दाबन्दीमा थुनिएका विद्यार्थी र नसुनिएको व्यथा बुधबार, वैशाख १०, २०७७ विद्यार्थीको गुनासो राज्यले सुन्नै पर्छ । सुन्ने मात्रै होइन, सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । बरु राज्यले विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धका सचेतना फैलाउने काममा लगाउन सक्छ । विद्यार्थीहरू सामाजिक दुरी कायम गर्दै, आफ्नो र समाजको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सरकारलाई सघाउन तयार छन् ।
कोरोनामा रेडियो, सरकार र अपेक्षाहरू सोमबार, वैशाख ८, २०७७ नेपाल सरकारले रेडियोहरूको लागि यत्ति गर्न सक्यो भने निकै राहत हुनेछ । अब आउने असारमा रेडियोहरूले अनिवार्य नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यतिबेलासम्म सरकारले यो सहयोगको घोषणा गर्नुपछ । आशा गरौँ ।
कोरोना,आर्थिक सङ्कट र नेपालको बाटो आईतबार, वैशाख ७, २०७७ कृषिमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोँच बनाई अगाडि बढौँ । अल्पकालीन रूपमा किसानका लागि प्याकेज ल्याऔँ । कोरोनाका कारण बजार अभावका कारण समस्यामा परेका किसानहरूलाई समेट्ने गरी राहत प्याकेज ल्याइहालौँ ।
कोरोनाको व्यवस्थापनमा मलेसियाको अनुभव शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७ लकडाउनको घोषणा भएपछि सबै सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, कलेज, कलकारखाना, बजार, व्यापारिकस्थल, पर्यटकीयस्थल, मानिसको डिड्डुलस्थल, जल, हवाई यातायात सबै बन्द गरिएको छ ।
बहुपक्षीय मनोसामाजिक तथा मानसिक असर बिहिबार, वैशाख ४, २०७७ कोभिड १९ होस् वा अरु जुुनसुकै रोगबाट बच्नका लागि पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेको मानिसको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनु नै हो । अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने जुन व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको मानसिक तनाव वा दवाव हुँदैन, उनीहरूमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सीमा र भोट बैँकहरू शनिबार, चैत २९, २०७६ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश मान्छेहरूलाई रात र दिन छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । अन्नको मुख देख्न नपाएको धेरै दिन भइसक्यो । अझ कति दिन देख्न नपाइने हो, ठेगान छैन ।
प्रिय सरकार, के हाम्रो मानवता मरेको हो ? शनिबार, चैत २९, २०७६ लाखौँ व्यक्ति भोकले मर्ने अवस्था छ, त्यो सरकारले बुझोस् । उनीहरुलाई गाउँ पुर्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ | त्यसपछि आफ्नो खेत, बारी जे छ, खनखोरस गरेर प्राणलाई धान्ने थिए ।
बालविवाह अन्त्यका लागि सूचनामूलक सामग्री भरिएको पेनड्राइभ वितरण
सीआईएन प्रतिष्ठान शाखामा सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन
वैज्ञानिकहरूलाई फड्को मार्नेगरी आविष्कार गर्न प्रधानमन्त्रीको अपिल
काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरुले एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने